‘अब सडकमा आगो बल्छ– डा. भट्टराई - Baikalpikkhabar
‘अब सडकमा आगो बल्छ– डा. भट्टराई
संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी १७ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारबाट बाहिरिँदा उसले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेर एकतर्फी रूपमा दुई बुँदे सहमति भंग गरेको आरोप लगाएको छ ।
अब तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन्छौं डा भट्टराइले भने । पुस २० गतेबाट पार्टी सुदृढीकरणको अभियान सुरु हुन्छ। त्योसँगै राजपालगायत विचार मिल्ने शक्तिहरुसँगको ध्रुवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्छ।सँगसँगै अहिले चर्चामा आएका सरकारले गरेको चरम भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति र संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुप, पहिचानसहितको संघीयता, नामाङ्कन–सीमाङ्कन सहितको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नारगरिकतालगायतका विषयहरुलाई लिएर जनअभियानमा जान्छौं।
मतलब, अब सडक र सदनमा संघर्ष गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराइले भने
हो, अब संघर्ष गर्छौं। हामी सरकारमा भएको हुँदा केही प्राविधिक कठिनाइहरु थिए। अब सडक, सदन र जनता बीचमा आफ्ना कुराहरु लिएर जान्छौं। पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियान सँगसँगै गतिविधि तीव्र बनाएर लैजान्छौ ।
बुधबार, ०९ पुष, २०७६, दिउँसोको १२:११ बजे